(SAWIRRO) Taliyaha saldhiga Bari Garowe iyo guddoomiyayaasha Barakacayaasha oo yeeshay kulan is xog-wareysi ah. | puntlandi.com
(SAWIRRO) Taliyaha saldhiga Bari Garowe iyo guddoomiyayaasha Barakacayaasha oo yeeshay kulan is xog-wareysi ah.
Garowe (Puntlandi) Taliyaha saldhiga Bari ee magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, Dhamme Cali Maxamed Muuse (Cali Kalluun ), ayaa maanta kullan gaar ah la qaatay guddoomiyaha xeryaha barkacayaasha ee magaalada Garowe.
Kullankaan oo ay ka qeyb galeen ku dhowaad 20 guddoomiye ayuu taliyuhu kaga dhegaysanayay warbixino ku saabsan xaaladaha kaamamka barakacayaasha iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Intii uu kullankaan socdau oo uu goob joog ahaa weriyaha Puntlandi ee Garowe, ayaa waxay guddoomiyayaasha iyo taliyaha aad uga hadlayeen xaga amniga iyo sidii ciidamada amnigu uga shaqeyn lahaayeen adkaynta nabad gelyada goobaha barakacayaasha iyo sidoo kale xoojinta wada shaqaynta labada dhinac.
Taliyaha saldhiga Bari, Cali Kalluun, ayaa ballanqaaday inuu wax badan ka qabandoono arrimo barakacayaashu ka cabanayeen oo ku saabsan in dad ku labisan dareeska ciidanka ay dhibaato ku hayaan, wuxuuna taliyuhu sheegay in tilaabo laga qaadidoona cidii falkaas lagu helo.